Ekpere iwepụ anya ọjọọ? San Luis Beltrán na San Benito
Ekpere ka iwepu anya ojoo ya Odi nkpa wepu ihe ojo a nke pro bu ihe ime mo ya gosiputara n’ahu onye emetụtara.
N'oge ụwaNa ọdịbendị dịgasị iche iche dị, a kwenyere nkwenye ahụ na anyaụfụ, echiche ọjọọ ma ọ bụ ọchịchọ a na-amụ site na anyaụfụ nwere ike ịbụ ihe kpatara ọrịa anụ ahụ dịka ọrịa, mmerụ na ọrịa nwere ike ibute ọnwụ.
A maara ya dị ka anya ọjọọ ebe a kwenyere na ọ ga-ebunye ya karịa site na anya ọjọọ juputara na vibes na ọchịchọ ọjọọ.
Okwu dị ọcha nke mmụọ nwere ike ịnwụ ma ọ bụrụ na ewereghị ihe ziri ezi, ọtụtụ ndị nwere ike ịhụ dọkịta ma nwee ike ịhụ mmezi ya mana ihe ọjọọ ahụ ka dị ebe ahụ na-emebi.
Ọ bụ ajọ ihe ọjọọ na-akpasu mmadụ iwe, na-egosipụtakarị akpụkpọ ahụ ma ọ bụ nwee nkụda mmụọ, ihe dị mkpa bụ ịchọpụta ya n'oge ma jiri ngwa ime mmụọ wepu ya.
1 Ekpere ka iwepu anya ojoo ya
1.1 Ekpere ka oghara iku anya
1.2 Ekpere nke St. Louis Beltran ka ewepu anya ojoo ya
1.3 Ekpere Holy Benedict iji gbochie ihe ọjọ
1.4 Ekpere maka anya ojoo na umuaka
Ebumnuche nke ahịrịokwu a kpochapu ihe ojoo na nsogbu niileỌ bụ ihe ọ nwere ike bute n’ahụ onye ahụ na-arịa ya.
A na-atụ aro ka ya na onye ahụ metụtara kpee ekpere na ha na-abụkarị obere ụmụaka mana ndị okenye anọghị n'ihe egwu.
Dabere na ọnọdụ nke ọ bụla na-atụ aro ịme ọtụtụ ahịrịokwu dị ka novenario, nke a iji wepu mgbọrọgwụ ọjọọ ahụ bụ ịhapụ ụfọdụ usoro ahụ na mmadụ mana enwere ike ị nwetaghachi ihe niile.
Ekwesịrị ikwu okwu ahụ nke ọma ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọtụtụ ndị ekwenyeghi na ọ dị.
Enwere ezigbo ikpe nke ndị mmadụ azoputawo na onwu na-abia Ọ bụ ajọ ihe a mere mgbe m kpechara ekpere.
Ekpere ka oghara iku anya
Anam ekuru gi n’aha nke Nna… (kpọtụrụ aha onye ahụ) nke Ọkpara… (kpọtụrụ aha n’aha ọzọ) na nke Mmụọ Nsọ… (kpọtụrụ aha ọzọ) Amen.
Jisos! Okike nke Chukwu
Ejiri m egwu m, ejighi m mma, ma ọ bụ jiri ígwè mee ya, ma ọ bụ jiri hama, n'ihi na enweghị ike igbutu ya.
Egburu m ya n’aha nke Nna, nke Okpara na nke Mmuo Nso.
Nwere mmasị n’ekpere ahụ ka ọ gwọ ma wepu anya ajọ ya?
Enwere ọtụtụ ekpere a ga-eme iji gwọọ anya ọjọọ ahụ, agbanyeghị na enwere ndị na-ekwu na ụfọdụ na-arụ ọrụ karịa ndị ọzọ mana Ọ dabere na nke ọ bụla.
Ka anyị cheta na nke a bụ ihe ime mmụọ n'ụzọ doro anya, ọ bụ n'ihi nke a na tupu ịme ekpere ahụ, ọ dị mkpa ịghọta nke ọma ihe achọrọ iji rụpụta nsonaazụ achọrọ.
Dịka isi mmalite nke ọrụ ebube dị egwu, ekpere na-enye anyị, n'ọnọdụ nke a, ọgwụgwọ zuru oke nke na n'ọtụtụ oge enwere ike ịhụ ya ozugbo, ya bụ, ịkwesighi ichere ogologo oge tupu ịmalite ịhụ mgbanwe dị ukwuu na onye ahụ. .
Ekpere nke St. Louis Beltran ka ewepu anya ojoo ya
Ihe okike nke Chineke, a na m aja gị ma na-agọzi gị n'aha Nna, Atọ n'Ime Otu, + Ọkpara + na Mmụọ Nsọ, + mmadụ atọ na eziokwu dị mkpa na nke Nwa Agbọghọ Na-amaghị Nwoke bụ́ Meri Nwanyị anyị Tụtara ime n'enweghị ntụpọ nke mmehie mbụ.
Nwa agbọghọ tupu amụrụ nwa + na ịmụ nwa + na mgbe amuchara nwa + na site na Saint Gertrude nwunye gị hụrụ n'anya ma nwee onyinye, puku ndị Virgins iri na otu, Onye-nwe San José, San Roque na San Sebastián yana maka Ndị-nsọ na ndị nsọ nke Courtlọ ikpe .
Maka ọmụmụ gị nke dị ebube + kacha dị ebube Nleghachi anya n ’Blessedlọ Mbilite n’Ọnwụ + Ebube: maka ihe omimi dị elu na nke dị nsọ nke m kwere na eziokwu, m na-arịọ ịdị ebube nke Chukwu, na-etinye nne gị dị nsọ dịka onye arịrịọ, onye ọka iwu anyị nke nweere onwe ya, na-akwụrụ ndị a nọ n'ahụhụ ike. ihe okike nke oria a, anya ojoo, ihe mgbu, ihe mberede na aru aru na ihe ojoo ozo, ihe ojoo ma obu oria.
Ekpere nke San Luis Beltrta Maka ajọ anya ọ dị ike!
Onye-enyemaka nke na enyere anyị aka inwere onwe anyị pụọ n'ọbụbụ ọnụ nke ụfọdụ ndị ji ike nke ihe ọjọ jigidere anyị.
San Luis Beltrta bụ ọkachamara na isiokwu nke ọgwụgwọ, n'ime ndị nwere ihe ime mmụọ.
Peoplefọdụ ndị mmadụ na-atụ aro isoro ụfọdụ osisi ọgwụ na-enyere aka nnwere onwe, mana nke a abụghị ihe dị mkpa ebe ọ bụ na naanị ekpere bụ ọrụ ebube ma dị ike.
Ekpere Holy Benedict iji gbochie ihe ọjọ
Oh Saint Benedict! Onye m hụrụ n'anya ma na-echeta mgbe niile, Onye n’iru ndị agha mara mgbe ọ bụla a ga-esi kpochapụ, Onye na-emere ndị ya amara, Onye jikwa obi ike na-efe Onyenwe anyị.
A na m arịọ gị na Nrusa Chukwu gị, Nyere m aka, Ozugbo enwere ike, I gbochie mmetụta nke ihe ọjọọ, Na ndụ m na ndị ikwu m, Ka ike gị nwee, goodnessdị mma na ebere. kpochapu nkpuru obi m na nmebi iwu.
Site n’ikike nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, m na-arịọ gị ka isonyere m n’oge niile nke ndụ m, m na-arịọ gị ka ị chebe m pụọ n’ihe ọjọọ na ihe egwu ọ bụla, si n’amasi na ihe ọjọọ, ọ bụrụ na ha nwere aka, ha enweghị ike ijide m Ọ bụrụ na ha nwere ụkwụ mba sorom n’azu, mee ka ndi iro gi nile merie ma maa jijiji, site na nchedo gi na nke Chineke.
Ire ọkụ ma ọ bụ ịma jijiji ahụ, ụjọ tụrụ m ma jikwaa kpaa nkata megide m, Ka egbugbere ọnụ m na ire m, Nwere naanị otu puku amara maka gị, Otuto na ngọzi, Obi iru ala na udo na mkpụrụ obi m, Nke na-enweghị nhụjuanya ma ọ bụ ọtọ, ma agụụ ma ọ bụ nwute, ha na-ezu ike n’ime m na ndụ m, ma ọ bụrụgodị na ha gafere, enwere m ike ịja aha nsọ gị.
Edoro m onwe gị nye gị, atụkwasara m obi na m nwere ntụkwasị obi na gị, Amen.
Reza Ekpere nke St. Benedict iji okwukwe gbochie ihe ojo.
Saint Benedict onye amara dịka odibo nke Chineke nakweere bụ ihe mere o jiri bụrụ onye inyeaka anyị n’ọnọdụ ndị achọrọ kpochapu ihe ojoo na ndu anyi, ulo, ọrụ, ụlọ y Familia.
Chọọchị Katọlik gburugburu ụwa kwusiri ike banyere iji Saint Benedict medal iji mee ka anyị pụọ ma ọ bụ gbochie m ml nke dị ebe niile.
A na-ahụ ike dị njọ na gburugburu ebe niile dị, ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ka echedobe ya, ikpegara St. Benedict ụbọchị ọ bụla na - enyere anyị aka idebe onwe anyị ọcha na ume ọjọọ ndị a na ihe ọjọọ niile nwere ike ịbịakwute anyị.
Ekpere maka anya ojoo na umuaka
N’aha nsọ nke Chineke nna;
N’aha nsọ nke ndi dara ada na nke ndi n’echebe elu-igwe ndi bi n’elu-igwe, na-echekwa uche nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi.
O nna m! Taa ana m etiku n’aha gị ka i nyere aka nke obere aka. N’oge ndị a, anyaụfụ nke onye na-achọ naanị ihe ọjọọ n’ebe onye agbata obi ya nọ na-abata ya.
Onye kachasị nsọ na obi ebere ị ga - eme ihe niile, Onyenwe anyị, amakwaara m na ị ga - eme ka ahụike gị weghachi ọnọdụ ahụ, obi ụtọ na otuto nke oge gara aga.
Nyere ya aka, Chineke Nke puru ime ihe nile: n'ihi na Gi onwe-gi bu Onye puru ime. Amen.
Seemmụaka yiri ka ọ bụ ndị kachasị nwee mmerụ ahụ na-ata ahụhụ site na anya ọjọọ, nke a na - emekarị oge n'ihi na ụmụ ọhụrụ na - eteta, n'ime obi ndị juputara na ụfọdụ mmadụ, ndị ahụ na - enwere anyaụfụ ahụ inwe ihe onye ọzọ nwere.
Okwu nke yiri ihe na-adịghị emerụ ahụ na anya gba ọtọ nwere ike ibute oke nsogbu nke na ha ga - emesị na-emetụta iguzosi ike n'ezi ihe nke ụmụaka.
Ndị a kacha akwadoro bụ Na-ekpe ekpere kwa ụtụtụ banyere ụmụaka iji chebe ha ma debe ha otú ahụ n’ụbọchị, nke a ga-abụrịrị ọdịnala ezinụlọ.
Enwere ike ịsa medals na amulet mana ọ dịghị ihe dị ike karịa ekpere.
Can nwere ike ikwu ahịrịokwu ise na-enweghị nsogbu.
Ihe dị mkpa bụ inwe okwukwe n’oge ekpere iji wepu anya ọjọọ. Ọ dịghị ihe ọzọ.
Kpee ekpere oge niile ikwere na ihe niile na-aga nke ọma.